☎ Cheap international calls to Zimbabwe landline and mobile by the lowest cost.
0,084 €/min — to call landlines
Telephone calls to & from Zimbabwe
Many people have relatives, friends or business partners living in Zimbabwe, but foreign calls are very expensive. Many people are not able or simply do not have enough time to communicate through various online services and apps. VOIPSCAN allows making cheapest international calls to Zimbabwe even from an offline device.
Cheap calls to Zimbabwe landline
The entire world has already got used to mobile devices, but sometimes you have to dial landline numbers — for example, to some companies where a landline phone is a must. To make a cheapest way to call Zimbabwe landline number, you need to register on our website, then «Create contact» in your personal account. The created contact will appear on your list with the number you need to call.
Cheap calls to Zimbabwe mobile
Do you want to call your relatives and friends while on vacation or a business trip, but expensive tariffs do not allow doing this? Just sign up to our service, create a contact and make cheap International calls to Zimbabwe mobile to mobile.
Cheap telephone calls to Zimbabwe
When you enter your personal account, you see the instructions on the top on how you can make calls to Zimbabwe via the SIP application. You can cheap VoIP calls to Zimbabwe through the created contact as well, simply by dialing the number in the future.